10 I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke
Endiza esibhakabhakeni, Okulandelayo 10 amabhilidi amahle kakhulu emhlabeni wonke ayimisebenzi yobuciko yabadwebi bezakhiwo abahamba phambili emhlabeni. Ukuhlanganisa izici zekusasa, izici eziqhubekayo neziluhlaza, lezi 10 izakhiwo ezinhle nazo ezinye zezindawo ezivakashelwa kakhulu emhlabeni jikelele.
1. I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke: I-Shard
306 amamitha ubude, i-Shard tower iyindawo eyaziwa kakhulu e-London. nge inkundla yokubuka engcono kakhulu eLondon, ungabona isibhakabhaka esihle sedolobha kusukela ophahleni lwe-skyscraper. Inkundla yokubuka i 244 amamitha futhi inikeza imibono cishe yonke indlela eya ekhoneni ngalinye laseLondon.
Kuvulwe phakathi 2003, i-Shard iheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Ikakhulukazi ngenxa yokuthi umklamo oyingqayizivele wezakhiwo ugqama kuzo zonke izakhiwo ezinkulu emhlabeni. Umklamo we-Shard uqukethe izingcezu zengilazi futhi yakhelwe njengengxenye yengilazi, bangu 11,000 amaphaneli engilazi ekwakhiweni kukaShard. Ngakho, lapho eLondon kuwufanele ukuvakashelwa, kanye nesidlo sakusihlwa esimangalisayo sokushona kwelanga ezindaweni zokudlela zakwaShard ezitezi 31-33, ephezulu e-UK.
2. I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke: Evolution Tower eMoscow
246 amamitha ubude, i-spiraling Evolution Tower eMoscow ingesinye sezakhiwo ezihlaba umxhwele kakhulu emhlabeni. I-skyscraper enhle iphethe isifunda sebhizinisi saseMoscow eDolobheni laseMoscow futhi ibheke uMfula iMoscow. Ngesiteshi sikamasipala, inxanxathela yezitolo, amahhovisi, kanye nezindawo eziluhlaza, le I-Evolution Tower ingenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eMoscow.
Isakhiwo sezakhiwo siyahlaba umxhwele futhi siyethusa, okwenza i-Evolution ibe yinye ye izindawo ezimangalisa kakhulu ukuvakashela eRussia. Ngakho, asikho isidingo sokusho ukuthi i-skyscraper yaseRussia ifaka izithombe eziningi zokuhamba emhlabeni jikelele futhi iwumthombo wokulingisa abakhi bezakhiwo nonjiniyela emhlabeni jikelele..
3. I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke: I-Empire State Building
Isakhiwo samahhovisi esidume kakhulu emhlabeni, i-Empire State Building kusukela ngaleso sikhathi 1931. I-scraper yaseNew York evelele yakhiwa ngeminyaka yawo-1920s emjahweni wokwakha izakhiwo eziphakeme kakhulu emhlabeni.. I-Empire State Building iwine umjaho lapho abaklami bezakhiwo u-Raskob noSmith beklama isakhiwo esiwumlando esivelele kakhulu e-Manhattan. 381 amamitha.
I-Empire State Building ingenye yezimpawu zomhlaba okufanele zibonwe eNew York. Kusukela esitezi sama-38, ungakwamukela ukuphuma kwelanga ndawonye nedolobha elingalali. Ngokubuka kweCentral Park, I-Fifth Avenue eya e-Times Square, ukubukwa okuvela ku-Empire State Building akunakulibaleka.
I-skyscraper yesibili ngobukhulu emhlabeni, Shanghai Tower ifinyelela 632 amamitha. Ukubusa okumangalisayo kwesibhakabhaka saseShanghai, I-Shanghai Tower inenkundla yokubuka ephakeme kunazo zonke emhlabeni enikeza imibono ye-Shanghai unyaka wonke.
Izici ezengeziwe eziyingqayizivele zifaka i-facade yengilazi, ngesiphezulu esivunguzayo, futhi esinye sezici ezithakazelisa kakhulu izindawo zangaphakathi eziluhlaza. Ngaphezu komklamo oluhlaza, umbhoshongo uklanywe njengomuzi ngaphakathi kwawo, ihhotela, izindawo zokudayisa, amahhovisi, nezindawo zezivakashi zomphakathi. I-Shanghai Tower akuyona nje eyodwa 10 amabhilidi amahle kakhulu emhlabeni wonke, kodwa futhi inkulu kakhulu, ngekhono lokukwamukela 16,000 abantu.
5. Ibhange laseChina Tower Hong Kong
Ukubusa kwesibhakabhaka saseHong Kong, Ibhilidi laseBank of China lingesinye sezakhiwo ezimangalisayo eChina. Ngezinye 367 amamitha, iBank of China Tower ingesinye sezakhiwo ezinde kakhulu emhlabeni wonke futhi iyisakhiwo esiphawuleka kakhulu enkabeni yeHong Kong.. Ngemiphetho ebukhali kanye nemiklamo engunxantathu ngaphandle, iBhange LaseShayina lizokugcina ubukele amahora amaningi ekugcineni.
Ngenkathi izivakashi eziningi eziya eHong Kong zithola lesi sakhiwo esinamabhilidi esitezi esiyingqayizivele, kukhona abambalwa abangahlabeki umxhwele. Isizathu yizona kanye izici ezihlukanisa i-BOC kwenye izakhiwo amahle eChina. Imiphetho ebukhali kanye no-X, ziyizimpawu ezingezinhle ku-Feng Shui. Nokho, ishwa elibi elingaba khona alivimbeli abahambi ukuthi bancome lobu buhle bezakhiwo nsuku zonke.
6. I-Marina Bay Sands eSingapore
Okukodwa kwe 10 amabhilidi amahle kakhulu emhlabeni, indawo yokungcebeleka. IMarina Sands ibhekene neMarina Bay, nezindawo zokudlela, kwekhasino, ishashalazi, emibhoshongweni emithathu, ixhunywe yi-SkyPark engamamitha angu-340 ubude. Ngaphezu kwalokho, inkimbinkimbi emangalisa kakhulu inechibi eliphakeme kakhulu elingapheli emhlabeni.
Umdwebi wezakhiwo uMoshe Safdie uchaze ukuthi ukwakheka kwesitezi esibhakabhakeni kugqugquzelwe idekhi yamakhadi.. Kukhona ukubukwa okumangalisayo kweSingapore kusuka echibini le-infinity, esitezi sama-57. Ngaphezu kwalokho, ungabuka isibhakabhaka esimangalisayo saseMarina Bay Sands esivela eGardens by The Bay, enye indawo enhle ongavakashela eSingapore.
7. I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke: I-Tokyo Skytree
nge 2 izitezi zokubuka, I-Tokyo Skytree skyscraper ingesinye sezakhiwo eziphakeme ezinhlanu ezinde kakhulu emhlabeni. Ngezinye 634 amamitha, ungathola ikhofi endaweni yokudlela ephakeme kakhulu emhlabeni, ngemibono emangalisayo ye-Tokyo. I-Skytree yakhiwa ukuze ibe umbhoshongo wethelevishini nokusakaza futhi kamuva yaba yizindawo ezibalulekile eTokyo..
Ngaphezu kwezitezi zokubuka, kanye nekhefi, ungavakashela i-aquarium kanye ne-planetarium esisekelweni sayo. Izitezi zokubuka zinikeza 360 ukubukwa kwamadigri kwedolobha elinekusasa nelijabulisa kakhulu eJapan, nase-Asia. Umugqa ophansi, woza uzilungiselele ukuchitha usuku olugcwele ubuka imibono futhi uvakashele izakhiwo eziningi ezimangalisayo e-Tokyo's Skytree skyscraper.
8. I-Canton Tower Guangzhou
I-China iyinhlanganisela ekhangayo yesimanje kanye neyasendulo, lapho amathempeli asinda khona eduze kwezakhiwo eziphakeme ezikhuphukela emafwini. Omunye izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-China yiGuangzhou kanye neCanton Tower yezinkanyezi. Ku-epic 604 ubude bamamitha, I-Canton Tower ibonakala kunoma iyiphi indawo e-Guangzhou.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ongayenza e-Canton Tower ukuthatha ukugibela ithilamu phezulu. Ngakho, uma ungenakho ukwesaba ukuphakama, woza ebusuku, when the tower is illuminated with bright rainbow colors. From tram combo to a viewing deck ticket, ukuvakashela i-Canton Tower kuyisenzakalo esivelele futhi esingaphezu nje kokuma esisekelweni somhlathi.
9. I-Liebian International Building
Impophoma enkulu kunazo zonke eyenziwe umuntu iyisici esihle kakhulu sebhilidi elimangalisayo emhlabeni.. I-Liebian International skyscraper 121 amamitha amade anempophoma phezu kobuso obungaphambili bayo. Impophoma ende kakhulu idla amaphampu amane kanye nemvula esisekelweni sayo. Ungasibona lesi sakhiwo esimangalisayo ohambweni lwakho lokuya e-China, ikakhulukazi eGuyang, eNingizimu-ntshonalanga yeChina.
I-Liebian skyscraper ingase ingabi yinde kakhulu emhlabeni, kodwa ngokuqinisekile ingenye ephezulu 5 amabhilidi amahle kakhulu emhlabeni.
10. I-Skyscrapers Enhle Kakhulu Emhlabeni Wonke: I-Agbar Tower Barcelona
I-Torre Glories iyibhilidi elimangalisayo phakathi kwezimpawu zendawo eziningi ezinhle e-Barcelona. Izitezi ezingama-38 144 Imitha ye-skyscraper wukudalwa komdwebi wezakhiwo waseFrance. I-skyscraper enhle inomumo we-geyser ekhuphukela esibhakabhakeni futhi yaklanywa ngemuva kwentaba iMontserrat.. Uma ubhekisisa uzoqaphela ukuthi yonke i-facade yenziwe ngengilazi.
Nokho, Isici esigqama kakhulu se-Agbar Tower ukukhanya okumibalabala. I-skyscraper yaseSpain ine 4,500 Imishini ye-LED. Lawa madivaysi e-LED abonisa izithombe futhi angakhiqiza 16 izigidi zemibala. Ngaphezu kwalokho, uma uzungeza i-Agbar Tower uzoqaphela ukubhekisela kolunye uphawu lwezwe olumangalisayo, Umndeni wakwaSagrada kaGaudi. Ngakho, nganoma yisiphi isikhathi lapho ufuna ukuvakashela lesi sakhiwo esihle sebhilidi, ulungele ukukuncoma usuku lonke.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizokujabulela ukukusiza ukuthi uhlele uhambo oluya e- 10 namabhilidi amahle kakhulu emhlabeni wonke ngesitimela.
Ingabe uyafuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “I-10 Enhle Kakhulu Emabhilidi Emhlaba Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)